ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: February 2010
ဒေးဘစ်ကော်ပါဖီးးကတောင် လိမ်မစားဘူးနော်..(ငနာငတုံးများနဲ့ ကွာပါ့)
မျက်လှည့်ပညာမှာ နာမည်အရမ်းကြီးတဲ့ ဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးကို သိကြတယ်မလား...အဲသူကတော့ သူရဲ့ပဉ္စလက် မျက်လှည့်ပညာနဲ့ လူများရဲ့နှလုံးသားများကို တအံ့တသြနဲ့ တုပ်လှုပ်သွားအောင် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ သူတယောက်ပါ...သူကတော့ သူ့ရဲ့အစွမ်းကိုအစနဲ့ မျက်လှည့်ပညာများဆိုပြီး ထုတ်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်....စာရေးသူတို့ မြန်မာပြည်က ငနာဂတုံးများကတော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဈာန်ရတယ်ဆိုပြီး လူတွေရဲ့ယုံကြည်မူ့ကို လိမ်စားသောနည်းဖြင့် ကိုင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်.....ဂတုံးများ ဈာန်ရလို့ လေပေါ်မှာ တကယ့်တမ်းသာ ပျံနိုင်မယ်ဆိုရင် ကြွားလို့ဆုံးမည့်မဟုတ် ကမ္ဘာကိုအသိပေး ကြေငြာ ဘလော့ဂ်များပေါ်မှာ ဖော်ပြကြမည့်ဆိုတာ ဧကန်မလွဲပါဘူး....ကြည့်ပါအုံးဗျာ..ဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးများကျုပ်တို့နိူင်ငံမှာ မွေးခဲ့မယ့်ဆိုရင် ဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မယ်လို့ စာရေးသူတော့ ထင်မိတယ်...စာရေးသူ ကြားမိပါသေးတယ်..မင်းဓမ္မကုန်းမှာ ရဟန်းနာ ဈာန်နဲ့ကြွလာဆိုပြီး မြို့ နယ်အသီးသီးက လူတွေ ဖူးဖို့သွားကြတယ်တဲ့...တကယ်ပင် ကြွနိူင်လို့လား.?????(စာရေးသူ ဒါလေးကို ဖတ်ရတော့ ငယ်ငယ်က စာရေးသူ ဦးလေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို သွားသတိရမိတယ်...သူက ကျုပ်ကို နောက်တာ သူကစာရေးသူကို ငါဆီမှာ ကားရှိတယ် တိုက်လည်း အများကြီးရှိတယ်..ဒါပေမဲ့တူလေးရယ် မင်းကြည့်ရင်တော့ မမြင်ရဘူးဆိုပြီး ရွှီးလုံးထုတ်ခဲ့တယ်..ဒီအတိုင်းလေးပါပဲ သူတို့ကလည်း ရွှီးလုံးထုတ်တယ်ဗျာ..ဘုရားကို မမြင်ရဘူးဆိုတာ ကျုပ်လက်ခံပေးလို့ ရတယ်...ဒီလို ဈာန်နဲ့ ကြွတာတော့ မမြင်ရဘူးဆိုတာတော့ လက်မခံပေးနိုင်ဘူး...ဒေးဘစ်ကော်ပါဖီးကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပဉ္စလက်ပညာနဲ့ ပြသသွားပါတယ်....ဂတုံးဘုန်းကြီးရဟန်းနာ ဈာန်နဲ့ကြွတယ်ဆိုပြီး ဗီဒီယိုတစ်ခု ကြည့်လိုက်ရသေးတယ်...ဘာမှသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရဘူးဗျာ...ကျွန်တော်ကြည့်တာ စွန်လွှတ်သလားလို့ အောက်မေ့ရတယ်...ဒါကို ဈာန်နဲ့ ကြွတယ်ဆိုပြီး ရှစ်ခိုးကြတယ်ဗျာ....အောက်ကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို မြင်ရတယ်ဗျာ....
Posted by messenger at 8:45 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဒေးဘစ်ကော်ပါဖီးတောင် လိမ်မစားဘူး
မှားပါတယ်ဗျာ အကြံဥာဏ်တော့ မပို့ပေးဘူး ပြဿနာတွေလိုက်ရှင်းနေရတယ်
သြော် ပို့စ်များရှားနေလို့ ခပ်တည်တည်ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ငြိမ်နေခါမှ ပြဿနာတခုကို ဖြေရှင်းပေးရအုံးမယ်....ရောက်လာတဲ့ အီးမေးခေါင်းစဉ်ကလည်း ရှင်းပေးပါ ဆိုပြီး ရောက်လာတယ်....ဘာကိုသွားရှင်းရမလဲမသိပါဘူး....ရောက်လာသူ့ရဲ့  အီးမေးကို ဖောက်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါ စာရေးသူကို ရုရှားက ကောင်မှလားတဲ့....မင်းတို့လုပ်တဲ့ဇာတ်ကို မင်းတို့နိုင်အောင် ကပါတဲ့ သူတပါးကို အပြစ်ပုံချဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့တဲ့....သူက စွပ်စွဲခံရထားတယ်တဲ့ သူ့လူမျိုးများ သူတို့ကို အပေါ်မှာ အထင်ရောက်မည်ကို အရမ်းစိုးရိမ်နေတယ်ပုံပဲ....ရောက်လာတယ်သူရဲ့ စာသားများကလည်း တအားမှားတယ်ဗျာ....စာရေးသူနဲ့ တွေ့(တွေ)နေရာမှာ တူနေတာနဲ့ စွပ်စွဲထားတာတဲ့.....စာရေးသူ တွေ့ပါတယ်...ထာဝရဘုရား နာမည်နဲ့ ဘလော့ဂ်လုပ်နေတဲ့ကောင်ကို ဒီကောင်က ပြောနေတာတွေ တခုမှ ဘောင်မ၀င်ဘူး သူရေးချင်းတာ လျှောက်ရေးနေတာ....ခင်ဗျားတို့ ပြန်ပြောရစရာအချက်တွေက အများကြီးပဲ...သင်ပေးလိုက်မယ်နော်....စိတ်မဆင်းရဲနဲ့....(၁) ခင်ဗျားတို့က စာရေးသူဘလော့ပေါ်မှာ လာရေးတာ မဟုတ်ဘူး...(၂)ခင်ဗျားရေးတဲ့နေရာမှာ တဲ့နေရာမှာ (တယ်)လို့ရေးတယ်....(၃)နောက်စွပ်စွဲနေရာမှာ ဆွတ်လို့ရေးတယ်...(၄)ခင်ဗျားစာများကို ဖတ်ရတာ မရှင်းဘူး စာများက ပူးကပ်တယ်...(၅)ကျွန်တော်က ချင်လို့ ရေးတယ် ခင်ဗျားစာမှာ ခြင်းလို့ ရေးတယ်....(၆)နောက်တခုက စာရေးသူက စာရေးတဲ့အခါမှာ အစက်လေးများကို ချပြီးရေးတယ်...အကျင့်ဖြစ်နေပြီ ဖတ်ရတဲ့သူရှင်းတာပေါ့ဗျာ....နောက်ခင်ဗျားရေးတာ ခင်ဗျားတုိ့ ခရစ်ယာန်ဆရာရဲ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ ရေးတာပဲ စာရေးသူတွေ့သားပဲ....ဘာကြောင့်လဲဆို မှတ်မှတ်ရရ ခင်ဗျားစာသားလေးကို သဘောကျ(မိုက်)လို့တောင် ခိုးချလိုက်သေးတယ်....ဟိဟိ. ထားပါတော့ စာရေးသူဘက်က နိူင်ငံ၊ စာရေးသူရဲ့ ပုံ စာရေးသူရဲ့  ဘာသာကို လူတိုင်း စိတ်ဝင်းစားကြတယ်....စာရေးသူ တိတိကျကျပြောနိူင်တာကတော့ စာရေးမိဘများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ပါတယ်၊ခင်ဗျားတို့လည်း စိတ်ဝင်းစားကြတယ်....ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလည်း မောနေကြပြီး စာရေးသူကို အရမ်းသိချင်ကြတာ....စာရေးသူလည်း ဖော်ပြချင်ပါတယ်...ခင်ဗျားကို ကျွန်တော်ရဲ့ နေရာလိပ်စာကို မဖော်ပြပေးနိုင်တာစိတ်မရှိပါနဲ့...ဒါကြောင့်မို့ အပင်းပန်ခံပြီး ခင်ဗျာ့စာကို ဒီလောက်လိုက်ရှင်းပေးနေတာပါ......ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ဒီအတိုင်းပဲ ကုလားမနိူင် ရခိုင်မဲနေတာ..ဒီလိုပြောလို့ မွတ်စလင်လို့ မထင်ကြနဲ့အုံးနော်...မွတ်စလင်မ်လို့ ထင်ခံရဖူးသေးတယ်..ဒီလိုပါပဲ ဟိုထင်လိုက် ဒီထင်လိုက် ..ကျွန်တော်သတင်းကြားတယ်...နာမည်တွေ ဖော်မပြတော့ဘူး ပထမက သူတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ယောက်ကို ထင်ကြတယ်...နောက် စင်္ကာပူက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက် ဆေးကြောင်ပြီး ရေးတယ်ဆိုပြီး သတင်းကြားလိုက်သေးတယ်....နောက်တယောက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားနေတဲ့ နာမည်ကြီးတယောက်ပဲ သူလည်း ထင်ခံရတယ်....သူတပည့်တွေ လုပ်တယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲခံရသေးတယ်...ယခုတော့ ခင်ဗျာတို့ အလှည့်ပေါ့.....စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ ဒီလို့ စွပ်စွဲမူတွေပေါ်လေး စာရေးသူ ကြိုက်လေပဲ.....ပစ်မှတ်ကို ထိအောင် မပစ်နိုင်လို့ပဲ...ဒါပေမဲ့ စာရေးသူ မကောင်းတဲ့ စိတ်မမွေးပါဘူး...ကိုယ်ကြောင့် မည်သူတဦးတယောက်ကိုမှ ဒုက္ခမရောက်စေချင်ပါဘူး....ခင်ဗျာတို့က ထာဝရဘုရားနာမည်နဲ့ ရေးနေတဲ့ ဘလော့ကို ရုရှားကကောင်တွေလို့ ထင်နေတာ...ကျွန်တော်ကတော့ ရုရှားက ညီလေးတွေလို့ မထင်ဘူး..ငနာဘုန်းကြီးတွေလုိ့ပဲ ထင်တယ်...ဒီကောင်တွေပဲ အလုပ်အကိုင်မရှိ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင်ပြီး သြောကားကြည့်နေတာ...လူမြင်အောင် သာသနာ့အတွက် ဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်နေတာ စာရေးသူ မသိဘူးလို့အောက်မေ့နေလား...ရုရှားကညီလေးတွေထဲမှာ ကျေးဇူးရှိတယ်...လွန်ခဲ့သော တနှစ်ခွဲနှစ်နှစ်လောက်က ထင်တယ်...သူတော့ မြန်မာပြည်ပြန်သွားပြီလား မသိဘူး..နောက်ပိုင်းမတွေ့တော့ဘူး..ရုရှားညီလေးတယောက်နဲ့ အွန်လိုင်း မှာရင်နှီးကြတယ်...သူပဲ စာရေးသူကို သင်ပေးတယ်...ဘလော့ဂ်ဆိုတာဘယ်လို ၀က်ဆိုဒ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်...စာရေးသူကွန်ပြူတာပျက်ရင် သူပဲ ကူညီပေးတယ်.....အခုတောင် ဘလော့စကင်း လဲချင်တာ ကြာပြီ မလဲတတ်တာနဲ့ သူပြောထားတဲ့စကားတွေနဲ့ ဆန်းတ၀ါးဝါးနဲ့ အသင့်လုပ်ပြီးသာ စကင်းနဲ့ အဆင်ပြေသွားတယ်...သူတို့က စနစ်ကြတယ်..ဘလော့ရဲ့ စက်တင်းပိုင်းကို အဦးဆုံးသင်ပေးတယ် မဆိုးပါဘူးစာရေးသူထက်တော့ အများကြီးငယ်တယ်...ဟက်ကင်း အချို့ အကြောင်းလည်း သင်ပေးဖူးတယ်....ရုရှားကညီလေးတွေက အချိန်ပြည့်အွန်လိုင်းမှာ ထိုင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး...သူတို့ကို မေးလိုက်ရင် ပင်ပန်းတယ်အကိုရာ ကျောင်းစာလည်းလုပ်ရတယ် တခါတလေ အိမ်ကိုဖုန်းဆက်ချင်တာတောင်မှ မဆက်နိုင်ဘူးတဲ့...ဟုတ်လည်း ဟုတ်တယ်ဗျ သူတို့ခမျာ လည်း ပင်ပန်းမယ်လို့ ထင်တယ်လေ..ဒါကြောင့်ပါဒီဘာသာရေးအတိုက်အခံဘလော့တွေက ရုရှားကညီလေးတွေ မဖြစ်နိုင်ဘူး ငနာဘုန်းကြီးပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ စာရေးသူတော့ ထင်မိတယ်....ဟိုကညီလေးတွေက အားတာမဟုတ်ဘူး ဘုန်းကြီးတွေပဲ အားတာလေ...ဒီကောင်တွေကလွဲလို့ တခြားသူတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး...စာရေးသူကို ရုရှားကကောင်လို့လည်း မထင်ကြပါနဲ့.....ခင်ဗျာတို့ကလည်းဗျ ကူညီမယ့်မရှိဘူး ပြဿနာက လိုက်ရှင်းပေးနေရသေးတယ်...ပို့ပေးပါလား အကြံဥာဏ်လေး ဘာလေးပေါ့ အခုတော့ စိတ်ပျက်လိုက်တာ...ကျွန်တော်အီးမေးတွေ စစ်ကြည့်တဲ့အခါ ကျွန်တော်ကို မွတ်စလင်လားဆိုပြီး သွေးတိုးစမ်းချင်တာနဲ့ ငါတို့နဲ့ လာဆွေးနွေးပေးပါဆိုပြီး စာအတိုအစလေးနဲ့ ရောက်လာတယ်..အမျိုးမျိုး သွေးတိုးစမ်းနေတာ...ပို့ပေးကြပါ အကြံဥာဏ်တွေ ပြဿနာတွေ မပို့ပေးကြပါနဲ့
Posted by messenger at 8:13 PM
ပဒုမ္မာဒေ၀ီ အကြောင်းကို အားလုံးပဲ ကြားဖူးကြလားမသိဘူး ခင်ဗျာ... ပဒုမ္မာဒေ၀ီသည် သားငါးရာကို ဟော ဖွတ် တယောက် ဟော့ ဖွတ် တယောက်နဲ့ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို စဉ်းစားရင် ရူးသွားနိူင်ပါတယ်... တရုတ်သိုင်းကားထဲမှ နှစ်(၁၀၀)အတွင်းအားကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော မီးဖွားဆရာမများ မွေးဖွားပေးမှသာလျှင် အဆင်ပြေတော့မည်..နိူ့်မို့ဆို ကလေးဆွဲထုတ်ရတဲ့ မီးဖွားဆရာမ ဖတ်ဖတ်မော၍ သေသွားနိူင်ပါတယ်...ဖွားသည့်မိခင်(ပဒုမ္မာဒေ၀ီတော့ ဘယ်လိုနေမည့် မသိ) ယနေ့ ကလေးနှစ်ယောက်အထက် မွေးဖွားလျှင်တောင်မှ ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားရသည်...ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားသည့် နည်းပညာကလည်း မနေ့တနေ့ကမှ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ.....(သြော်ပဒုမ္မာဒေ၀ီရယ် နင့်အကြောင်း စဉ်းစားရင် ငါရူးချင်လာတယ်ဟယ် ...နင်အပေါက်တော့ .... ဘယ်လိုနေမည်မသိပါ...
ဆက်မပြောတော့ပါဘူး...ကိုယ်တော်ချောက တအားရိုင်းတာပဲဟု ပြောကြအုံးမည်..စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာလို့ စဉ်းစားမိသွားတာပါ စိတ်မဆိုးကြပါနဲ့.... အခြားသောဘာသာ၊ ဘာသာမဲ့များ ခင်ဗျာ အားလုံးပဲ ယုံပေးလိုက်ကြပါ...ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းကျမ်းက ရွှီးထားတာကို...မယုံဘူးဆိုလျှင်လည်း ဆဲခံရမည့်အတူတူ ယုံပေးလိုက်နော်)
ယနေ့ အမွှာပူးမွေးဖွားခြင်းတွင် ၊ ဟော တစ်ယောက်၊ ဟောတစ်ယောက်ဖြင့် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် စံချိန်တင်ရန် သူထက်ဌါ အပြိုင် အဆိုင် ကြိုးစားနေကြသောလည်း၊ ယနေ့ မြန်မာ့ အမွေအနှစ်ဖြစ်သော ဓမ္မစာပေတွင်ကား ` ပဒုမ္မာဒေ၀ီ´´သည် ကား သားငါးရာကိုပင် မွေးဖွားပေးနိုင်သော အမျိုးသမီးပင်ဖြစ်သည်ကို၊ အားလုံးကိုယ်စား သမိုင်းတွင် ရေးသားရန် အသိပေး၊ နှိုးဆော်လိုက်ရပေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ခင်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ ဓမ္မာ စာပေထဲမှာ ဤသို့သော အကြောင်းအရာကို ရှိသည့်ကို ... ကမ္ဘာကို အသိပေး ကြေညာ သမိုင်းမော်ကွန်းတင် ကဗ္ဗည်းတင်ဖို့ လိုပါသည်......
သြော် ဒီအကြောင်းကို ပြောတော့ ပီတာကျော်ကို သွားသတိရမိတယ်..ဒီကောင်က ကမ္ဘာထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းတွေကို ရေးသားနေတဲ့ ကောင် ပဒုမ္မာဒေ၀ီအကြောင်းကို မရေးသေးဘူးနော်....(သြော် ဗုဒ္ဓ၀င် ကျမ်းရယ် သူများမယားကို ရက်ရက်စက်စက် သားငါးရာကို ဖွားခိုင်းရလား....မညာမတာ ရက်ရက်စက်စက်ကွယ်.....အပေါက်ချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ် မရှိ ကြဘူး နော်......
နည်းနည်းပါးပါး အယောက်(၁၅)ယောက် အယောက်(၂၀)လောက်ဆို မျက်လုံးပိတ်ပြီး ယုံပေးလို့ ရသေးတယ် အခုတော့ သားငါးရာဆိုတော့ စာနာစိတ်မရှိကြတာဟာတွေ အဟင့် ဟင့် ဟင့် ရက်စက်ပါပေ......
Posted by messenger at 7:23 AM
Labels: မယုံလျှင်ဆဲခံရမည်အတူတူ ယုံလိုက်နော်, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဗုဒ္ဓဘာသာ သီရိလင်္ကာနှင့် မြန်မာနိူင်ငံသို့ ပြန်ပွားသည့် အကြောင်းအရာများ
သီရိလင်္ကာသည် အာသာက၏ သား မဟိန္ဒနှင့် အဖေါ်(၆)ဦးကြောင့် ဘီစီ ၂ရာစုအတွင်းတွင် ဘာသာပြောင်းခဲ့ရသည်....သူတို့သည် ဘုရင်ကြီး ဒေ၀နံပိယ တစ္စနှင့် မူးမတ်များစွာကို သာသနာပြောင်းစေခဲ့သည်... ဤအချိန်ကာလသည် ရှေးရိုးစွဲ ဆင်ဟာလိတို့၏ ဗဟိုဖြစ်သည့် မဟာဝိဟာရ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို တည်ဆောက်သော ကာလဖြစ်ပေသည်...ပါဠိပိဋကတ်အား မင်းကြီး ၀ိတ္တဂါမနီ လက်ထက် ဘီစီ၂၉ -၁၇ ခုနှစ်များတွင် သီရိ လင်္ကာ၌ မှတ်တမ်းတင် ရေးမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်၍ ထို၌ ထေရ၀ါဒ ရိုးရာ အားကောင်းခဲ့ပေသည်....နောက်ပိုင်းတွင် ဗုဒ္ဓဃောသ (အေဒီ ၄-၅)ကဲ့သို့ အချို့ သော အဌာကထာ ပညာရှင်များ ထွန်းကားခဲ့၍ သူတို့သည် ရိုးရာ ပြွန်းသော အဌာကထာများကို စနစ်တကျ ပြုစုခဲ့ပေသည်....ထိုကာလတွင် မဟာယန ၀ါဒမှာ သီရိလင်္ကာ၌ အထိုက်အလျှောက် သြဇာလွှမ်းမိုးသောလည်း ထေရ၀ါဒမှာ အပြီးတိုင် ချုပ်ကိုင်နိူ်င်ပြီး သီရိလင်္ကာသည် ထေရ၀ါဒ အမာခံနယ်မြေ ဖြစ်လာခဲ့ကာ ထိုမှတဆင့် ၁၁ ရာစုမှ စတင်၍ အရှေ့တောင်အာရှသို့ ပြန့်နှံ့ခဲ့ပေသည်.....
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်၏ အရှေ့ဘက်နယ် (ယခုခေတ် မြန်မာနှင့် ထိုင်း) ဒေသများတွင် အိန္ဒိယဉ်ကျေးမှုမှာ မွန်လူမျိုး အပေါ်သို့ အကြီးအကျယ် လွှမ်းမိုးခဲ့ပေးသည်..... မဟာယန၊ ဟိနယန ဂိုဏ်းများ မကွဲမှီ ၃ ရာစုမှ စတင်၍ အိန္ဒိယ ဧကရာဇ် အာသောက ရာဇာ၏ သာသနာပြုခြင်းကို မွန်တို့သည် ခံရသည်ဟု ဆိုပေသည်....မြန်မာနိူင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိ ပိသနိုးကဲ့သို့ ရှေ့ကျသော မွန်ဗုဒ္ဓကျောင်းဆောင်များသည် အေဒီ ၁ရာစုနှင့် ၅ရာစု ကြားကာလကပင် ရှိနေပေသည်... (ဤအကြောင်းအရာများကို history of buddhism မှာ ရှာဖွေဖတ်ရူနိူင်သည်..)
အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယ၏ ဂုပ်တ ယာဉ်ကျေးမူနှင့် ဂုပ်တ မတိုင်မှီ ကာလယဉ်ကျေးမှုများ လွှမ်းမိုးသော မွန်တို့၏ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုများသည် အေဒီ ၅ ရာစုနှင့် ၈ ရာစုအကြား ထွန်းကားခဲ့သော မွန်ဘုရင့်နိူင်ငံများ၏ အောက်တွင် အရှေ့တောင်အာရှ တလျှောက် ပြန့်နှံခဲ့ပေသည်.... အေဒီ ၆ ရာစု ပတ်ဝန်းကျင်မှ စ၍ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာ တရွေ့ရွေ့ ပွားများနေသော အရှေ့တောင် အာရှ၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် မွန်တို့၏ သြဇာအောက်၌ ထေရ၀ါဒ ထွန်းကားခဲ့ပေသည်....မြန်မာလူမျိုးများ အဖို့ကတော့ ပုဂံမင်းအနော်ရထာ ရှင်အရဟံအား ဖမ်းဆီး ခဲ့ရမှ အေဒီ ၁၀၅၈ တွင် မြန်မာနိူင်ငံသည် ဗုဒ္ဓဘာသာထေရ၀ါဒ စထင်ပြန်နှံလာခဲ့ကြောင်း သိရလေသည်...မြန်မာနိူင်ငံအား စေတီ တိုင်းပြည်လို့လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်("the land of pagodas") ...လူနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှ မဟုတ်တာ....(ကုလားချီးပုံတွေ ထွန်းကားတဲ့ တိုင်းပြည် )..
(ကျွန်တော်စိတ်ထင်ပေါ့နော်...အိန္ဒိယက ကုလားတွေက တိုင်းတပါးသားတွေကို နာမ်နှိမ်ချင်လို့ သူတို့ချီးပုံကို ပေးခဲ့လား မသိဘူး...ဘာမှန်းညာမသိတဲ့သူတွေက ချီးပုံလား ဘာလားမစဉ်းစားတော့ဘူး...ဖင်မြီးခေါင်းထောင်ပြီး ကန်တော့ တော့တာပဲဗျ...(စိတ်မဆိုးရဘူးနော်...ထင်မိတာလေ ပြောမိတာပါ....))
Posted by messenger at 4:45 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, အရှေ့တောင်အာရှသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြန်ပွားလာပုံ
မေတ္တာရှင်သို့ စဉ်းစားချင်ချိန်တတ်အောင် သင်ပြသည့်စာ
လူက ခွေးသူတောင်းစားစိတ်ဓာတ် ....ယူသုံးလိုက်တဲ့ နာမည်ကအကြီးကြီး မိုးလောက်ကြီးရှိမယ်ထင်တယ်.... နာမည်က မေတ္တာရှင်....မပြောတော့ပါဘူး ဒီခွေးသားလေးက ဗမာတပ်မတော် အကြောင်း လာမေးတယ်ဗျာ သူဘုန်းကြီး အနည်းငယ်ပါတာကိုပဲ အဆန်းလုပ်လို့်ဗျာ.....ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားနေတဲ့ နိူင်ငံမှာ ဒီခွေးသားတွေ မပါရင် ဘယ်လိုလူတွေ ပါရမလဲ....
မြန်မာနိူင်ငံမှာ ရှိတဲ့ ၀တ်စုံသုံးမျိုးပဲ ရှိတယ်....တမျိုးက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လိုလိုလားလား ကြည်ဖြူမိတယ်.....ကာလာရောင်လေ....အဖြူအစိမ်း ကျောင်းသားဝတ်စုံ......နောက်နှစ်ရောင်ကတော့ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် စောက်မြင်ကတ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အနီရောင်(ဂတုံးများ ၀တ်စုံ) အစိမ်းရောင် (စစ်သား) ဤနှစ်မျိုးကတော့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့ ကာလာရောင်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.... လာလာမေးတယ်ဗျာ...သူစာကို တွေ့ပါတယ်...မေးကတည်းက စဉ်းစဉ်းစားစားကို မမေးဘူး ....ချီးဘူးကတော့....မေတ္တာရှင်ဆိုတဲ့ ကောင်.....မင်းတစ်ယောက် ကတော့ ရူးများရူးနေလားမသိဘူးကွာ.... ရဲဘောသုံးကျိပ်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲပါတာ ဆန်းလာကွာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာအများစုနေတဲ့နိုင်ငံ ပဲလေ။ ၅၅ သန်း ထဲမှာ အယောက် ၃၀ ထဲလေစဉ်းစားကြည့်အုံး။
အဲ့ဒီနေရာမှာ မူစလင်မ်နိုင်ငံဆိုရင် မူစလင်မ်တွေပဲဖြစ်မှာပေါ့။ကွန်မြူနစ်နိူင်ငံ၊ ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဆိုလည်း ထိုနည်း၎င်းပဲလေ။ မင်းတို့ ဗုဒ္ဓ နိုင်ငံတွေ ဟာ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ အောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုကတည်းက တခုခု လွဲမှားနေတာ ကျိန်းသေနေပြီလေ။ နာဂစ်တုန်းက ဘုန်းကြီးတွေလှူတာမပြောနဲ့လေ။ မင်းဘုန်းကြီးက ဘယ်ကစောက်လုပ် စောက်ကိုင်လုပ်ပြီး လှူတာလဲ...ဆိပ်ကမ်းမှာ ကူလီ ထမ်းပြီး လှူလိုက်တာလား...ပြည်ပက မြန်မာတွေ နီးစပ်ရာ လက်လှမ်းမိသလောက် ငွေတွေ ကောက်ခံပြီး လှူခဲ့တာာ...ဒါကိုမှ ငနာဘုန်းကြီးက လက်ညိုးထိုးပြီး ခိုင်းနေတာ မဟုတ်လား....ဘယ်ငနာ ဂတုံးတကောင် ဆန်အိတ်ထမ်းပြီး လှူခဲ့တာ ရှိလား....လက်ညိုးထိုးပြီး ဟိုကားကား ဒီကားကားနဲ့ ဆရာကြီးလို ဘာလိုလိုနဲ့.....
တစ်ကမ္ဘာလုံးက အကြမ်းဖက်သမားခေါင်းဆောင်လို့ စွပ်စွဲထားတဲ့ ဘင်လာဒင်တောင် နာဂစ်ကို လှူဖို့ အာရဗ်စော်ဘွားများနိုင်ငံတွေကို ထွက်ပြီးဆော်အောခဲ့တာရော မင်း သိလိုက်ရဲ့လား။ နာဂစ် စစဖြစ်ဖြစ်ချင်း စီးချွမ်းမဖြစ်ခင်မှာ ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ ရော မလှူခဲ့ဘူးလား။ ဥရောပတိုက်၊အမေရိကန်၊သြစတြေးလျနိူင်ငံတွေဆိုလည်း အများကြီးလှူခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား... ခင်ဗျားတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ သီရိလင်္ကာတို့ လာအိုတော့ လှူတာ ကြားလိုက်လား။ဒီငနာနိူင်ငံတွေ ဘာလုပ်နေလဲ(ခွေးသူတောင်းစားနိူင်ငံဖြစ်နေတယ်).... မင်းဘုရားနေထိုင်ခဲ့တဲ့ သီရိလင်္ကာတောင် ငတ်နေလို့ ဒို့မြန်မာအစိုးရဆီမှ ပြန်ပြီးသူတောင်းစားလို တောင်းခံနေရတာကော သိလား.....မင်းကို ကုန်ကုန်ပြောလိုက်မယ်ကွာ ဗုဒ္ဓကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံ တွေအားလုံးဟာ ကွန်မြူနစ်လက်အောက်မှာပဲ ရှိတယ်နော် ဒါကိုမင်းလက်မခံလို့မရဘူး။
လောလောဆယ် နအဖ ရဲ့ ဆရာတွေအကုန်လုံးက ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနော်။ တရုတ်၊ မြောက်ကိုးရီးယား၊ ရုးရှား နိုင်ငံတွေလေ။ စစ်ဒါဏ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဗီယင်နမ်တောင် မြန်မာနိုင်ငံ လာအို တို့ထက်အများကြီးတိုးတက်သွားပြီ ဒါတွေက အထူး ပြောပြနေစရာမလိုပါဘူး ....ငါဆီဘောက်ပိတ်ထားတာ မင်းတို့ ဆဲလွန်းလို့ ဆဲတာငါမနာပါဘူး မင်းတို့ အဆဲသန်တာ တခြားဘာသာတွေ တွေ့ရင်ရှက်ဖို့ကောင်းလို့ စေတနာနဲ့ တခြားဘာသာတွေ မင်းတို့ မိုက်ရိုင်းတာ မသိအောင် ပိတ်ထားတာ မှားမယ်ဆိုရင်လည်း စေတနာအမှားတွေပဲ ဖြစ်မှာပါ...
ငါတို့ မြန်မာနိူင်ငံကလည်း ဆိုးတယ်ကွာ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးဖို့ကြတော့လည်း ဘာ ဘုရားမှ မရှိဘူး....
ခင်ဗျာတို့ အားလုံးအတွက် အကြံပေးပါရစေ...အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာတခုကို သက်ဝင်ယုံကြည်နေသည့်ထက် ဘာ ဘာသာကိုမှ မယုံကြည်တာကမှ ပို၍ ကောင်းပါလ်ိမ့်မယ်.....
Posted by messenger at 6:06 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, မေတ္တာရှင်သို့ ဆုံးမစာ